၎င်းနှင့်ဆိုတေး(ခ)အောင်သက်ပိုင်တို.မှာ မြ၀တီမြို.တွင်တွေ.ဆုံချစ်ကြိုက်ကာထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက် မြို.တွင် အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ.ခြင်းဖြစ်ပြီး ဇွန်လအတွင်းကဆိုတေးမှ၎င်း၏ ဇနီးဆိုသူအား ၄င်း၏ မိသားစုဝင်များနှင့်တွေ.ဆုံပေးခဲ.ကြောင်း၊ထိုနောက်ဇူလိူင်လ(၄) ရက်နေ.တွင် ၄င်းတို .နှစ်ဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်ရှိ ၄င်းဇနီးဟုဆိုသောအမျိုးသမီးနှင့်အတူသွားရောက်နေ ထိုင်ခဲ. ကြကြောင်း ၊ ထို.နောက်ဆိုတေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ၌၄င်းလက်ခံထားသောရှိုးပွဲရှိသည်ဟုဆိုကာ၎င်းမှ ဘန်ကောက်မှ ရန်ကုန်သို.လေယာဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊၄င်း၏အမျိုးသမီးဖြစ်သူကမဲဆောက်မှ ရန်ကုန်သို.လည်းကောင်း ဇူလိုင်(၁၀)ရက်နေ.တွင်ရောက်ရှိခဲ.ကြကြောင်း၊ ၄င်းနောက် ဆိုတေးမှ၎င်း၏ အမျိုးသမီးဖြစ်သူအား ရန်ကုန်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်ခေတ္တထားခဲ.ကာပုဂံမြို.တွင်ရှိုးပွဲရှိ သည်ဟုဆိုကာဇူလိုင်လ(၁၄)ရက်နေ.တွင် တောင်သာမြို.သို ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမှသွားရောက်စဉ်ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွား ခဲ.ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏ အမျိုးသမီးဖြစ်သူဟုဆိုသူမချိုချို(ခ) Cream ကပြောသည်။
ကျွန်မ သူကားမှောက်တယ်လို.သတင်းကြားကြားချင်းမန္တလေးဆေးရုံကိုလိုက်သွားပေမဲ. သူမိသားစုတွေ က ကျွန်မကိုသူနဲ.တွေ.ခွင့် မပေးခဲ.တဲ.အပြင်ကျွန်မတို.နှစ်ယောက်ရဲ. ကိစ္စကိုဘယ်သူ မျမသိအောင်နေပေးဖို.သူ.အစ်ကိုကပြောခဲ.တယ်။နောက်ထပ်သိရတာက သူနဲ.အတူပါသွားပြီးဆုံး သွားတဲ. မိန်းကလေးက အရင်ကျွန်မနဲ.စတွေ.စဉ်တုန်းကပါလာခဲ .ပေမဲ. သူကို.မေးကြည့်တော့ သူက သူနဲ. ဘာမှမပတ်သတ်ဘူးလို.ပြောခဲ.ပြီးကျွန်မကို ချစ်ရေးဆိုခဲ.လို.သူ.အချစ်ကိုလက်ခံခဲ.ပြီး အတူပေါင်း သင်းနေ ထိုင်ခဲ.တာ။နောက်ပြီးဒီကိစ္စကို သူမိသားစုတွေလည်း သိတယ်။ အခုသတင်းတွေ ထွက်တော့သေဆုံး သွားတဲ.မိန်းကလေးကသူ.ဇနီးဆိုပြီးသတင်းတွေ ထွက်နေတာနဲ.ကျွန်မအပေါ် သူမိသားစုက ဆက်ဆံတာမကြိုက်လို. အခုလိုပြောရတာပါ။ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
ထို.အပြင် မန္တလေးဆေးရုံသို.ဆိုတေး၏အခြေအနေအားကြည့်ရန်သွားရောက်စဉ် ၄င်း၏အကို ဖြစ်သူ ကိုဇာနည်ဆိုသူမှဆိုတေးနှင့်ပတ်သတ်သောကိစ္စများအားအခြားမည်သူကိုမှ မပြောရန်ပြောဆိုခဲ.သည် ဟုသူမကထပ်မံပြောသည်။
ကျွန်မအနေနဲ.ဆိုတေးကိုတကယ်ချစ်ခဲ.တာပါ။သူဘာသာကျွန်မအပေါ်ဘယ်လိုပဲလိမ်လိမ် ကျွန်မ အနေနဲ. သူ.အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးမိသလိုအရမ်းလည်းသနားမိတယ်။သူ.အပေါ်ထားတဲ. အချစ်တွေ လည်းပျောက်သွား မှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုမန္တလေးဆေး၇ုံမှာသူ. အခြေအနေမကောင်းရင်ဘန်ကောက် ကဆေးရုံ မှာသူရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတဲ. အထိဆေးကုပေး သွားဖို.အထိစီစဉ်ထားတယ်ဟု ၄င်းက ထပ်လောင်းပြောသည်။
အဆိုပါသတင်းနှင့်ပတ်သတ်၍တေးသံရှင်ဆိုတေး၏ဇနီးဖြစ်သူဟုဆိုသောမချိုချို(ခ)Cream၏ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက၄င်းအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြပါသည်။အထက်ပါ သတင်းတွင်ဖောပြထားသော ဓာတ်ပုံများမှာလည်းကာယကံရှင်၏ သဘောတူ ခွင့်ပြု ချက်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းအသိပေး အပ်ပါသည်။
တေးသံရှင်ဆိုတေးနှင့်၎င်း၏ဇနီးဆိုသော မချိုချို တို.ကားအက်ဆီဒင့်မဖြစ်မှီယခုနှစ်ဇူလိုင် လအတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်တွင်အမှတ်တရရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံအချို.
At 7/17/2013 12:47:00 PM